Ngathi - TMTeck Instrument Co., Ltd.
I-TMTeck Instrument Co, Ltd. (emva koku: i-TMTeck) ngumvelisi ophambili we-NDT kunye nababoneleli eBeijing China kwaye ibonelela ngetekhnoloji entsha kunye nolwazi olubanzi lokunceda abathengi kumazwe amaninzi kwihlabathi liphela. Ukuza kuthi ga ngoku, i-TMTeck ibisebenza kwimimandla yezisombululo zovavanyo oluqhutywa yitekhnoloji ezisa imveliso, umgangatho kunye nokhuseleko.
Yaqala ukusuka kwi-Ultrasonic Transducers kunye ne-Coating Thickness Gauge, ngoku i-TMTeck iphuhlise ngaphezulu kwe-10 uthotho lwezixhobo zovavanyo, kubandakanya i-Ultrasonic Flaw Detector, Ukogquma ukujija, abavavanyi bokuqina, i-Ultrasonic Thickness Gauge, izixhobo zabo kunye nezinye izixhobo ze-NDT. Ezi mveliso zisetyenziswa kakhulu kuhlalutyo lwezixhobo ezenza ukuba abathengi bethu babeke iliso, balawule kwaye baqinisekise iinkqubo zabo kunye nokusetyenziswa, kwaye iimpahla zethu zinezatifikethi ze-CE.
I-TMTeck izinikele kulondolozo lwentsebenziswano yexesha elide nabaxumi bethu ngokunikezela ngeenkonzo ezingenakuthelekiswa nanto, iingcebiso zetekhnoloji noncedo. Siyila kwaye sivelise uluhlu olubanzi lwezixhobo zokusebenza ze-NDT kunye nezixhobo. Ngogxininiso lwethu oluqhubekayo kugxilwe kubathengi kunye nokhuphiswano lwehlabathi, i-TMTeck ibisoloko iyeyona nto iphambili kwiinkampani ezikumgangatho wehlabathi xa kufikwa ekukhokeleni kwizixhobo ze-NDT. Kwaye siphuhlisa iimveliso zoluhlu olutsha ngokwemfuno zentengiso. Sinokubonelela ngesiqinisekiso esihle kubathengi bethu.
Umntu Wenze Umonakalo
Ukuba imveliso ibiphantsi koxhatshazo, ingozi, utshintsho, ukuguqulwa, ukuphazanyiswa, ubuqili, ukusetyenziswa gwenxa, okanye ilungisiwe okanye yanikezelwa ngumntu ongagunyaziswanga ukuba anikezele ngenkonzo, okanye akanalo ikhadi lesiqinisekiso, inkampani yethu ayizukubakho inoxanduva lokulungisa.
Ukuba imveliso ifunwa ngaphakathi kwexesha lesiqinisekiso (ngaphandle kwezincedisi ezingalungiswanga), nceda uthumele imveliso ukuba ilungiswe ngelungelo lekhadi lesiqinisekiso. Ukuba umhla wokonakala kwemveliso ugqithile, inkampani yethu iya kuhlawulisa ngokulungiswa.
Imveliso yenkampani yethu inokulungiswa simahla kwisithuba seminyaka emibini. Kananjalo ukulungiswa kobomi bonke bomvelisi.
Umsebenzisi kufuneka aligcwalise eli khadi aze abuyele kwinkampani ethengileyo, kungenjalo, imveliso ayinakulungiswa simahla.
I-TMTeck Manufacturing Limited yasekwa, uhlobo lwethu lokuqala lwemveliso olusungulwe ngempumelelo- uthotho lokulinganisa ubukhulu
uthotho lwesiphene sesiphene se-ultrasonic siphume, sonwabela igama eliphezulu kumazwe aseYurophu naseMelika.
uthotho Leeb Ukuqina Tester eze kwintengiso ngempumelelo, kwimarike reated ngamandla ..
inkampani yethu Beijing TMTeck Instrument Co., Ltd yasekwa ..
imveliso yeflegi -Ukujija kwe-Ultrasonic Ukutyeba kuphuhliswe ngempumelelo, kuqhuba ukusebenza ngaphezulu kwesigidi esinye.
iphuhlise ngempumelelo itekhnoloji yokwenza zonke iintlobo zeeprosesa ze-ultrasonic ezinokuhlangabezana neemfuno ze-GE, i-OLYMPUS kunye nezinye izixhobo zamazwe asentshona.
Umzi-mveliso wethu uhambise indawo entsha yoshishino, umzi-mveliso wecandelo le-300m², unyuse kakhulu amandla emveliso.
Uhlobo olutsha lwenzwa yangaphandle Roughness Tester TMR360 yangena kwimakethi ngempumelelo kwaye yanandipha udumo olukhulu kolu shishino.
Ukuze sihlangabezane neemfuno zabathengi baseMntla Melika, siye saqulunqa iiseti zekristale zodidi lwekristale kunye nezinye izinto ezinokuhanjiswa, ezinemvakalelo ephezulu kunee-GE's.
Sizimisele kuphando kunye nophuhliso lwe-eddy yangoku ye-weld flaw detectors, kwaye kungekudala sizokwazisa ishishini elikhokelayo eligcweleyo ledijithali yangoku ehambelana nemilinganiselo ye-EU EN1711-2000 kunye nemigangatho yesizwe ye-GB / T26954-2011.
I-TMTeck izinikele kulondolozo lwentsebenziswano yexesha elide nabaxumi bethu ngokunikezela ngeenkonzo ezingenakuthelekiswa nanto, iingcebiso zetekhnoloji noncedo.
- TMTeck Isixhobo Co, Ltd.
Uvavanyo lweBhloko yoVavanyo, Iibhloko zokuLungisa, Iibhloko zokuLungisa iiPayipi, Iintambo ze-Ultrasonic Transducer, Uvavanyo lweBhloko, Ulungiso lwee-Ultrasonic,